Wararka - Generac wuxuu bilaabayaa beddel wareejin toos ah oo toos ah oo leh hawl kormeer tamarta guriga ah
Qalabka Wareegga Hawada
Wareejinta Wareejinta otomaatiga ah
PC Fasalka Beddelka otomaatiga ah
PC ATS maamusha
Wareejinta Wareejinta otomaatiga ah ee CB
Wareejinta Ilaalinta Controland
Guntinta Wareeg Yar
Moodhadhka Wareegga Wareegga Wareegga
Kelida Gooni Isu Taaga
Generac wuxuu bilaabayaa bedelka wareejinta otomaatigga ah ee ugu horreeya iyadoo lala socdo hawlgalka kormeerka tamarta guriga
Waukesha, Wisconsin, Maarso 27, 2020 / PRNewswire / - Koronto la’aan soo foodsaartay Xeebta Bariga ilaa Xeebta Galbeed ayaa horseeday baahida sii kordheysa ee dhaliyaha keydka guryaha. Kordhinta biilasha korantada1, GeneracⓇ Power Systems (NYSE) kormeerkeeda cusub ee tamarta PWRview switch wareejinta otomaatiga ah ee tooska ah (ATS) waxay si gaar ah u xalisaa caqabada ah in qoysaska laga ilaaliyo korontada iyadoo xisaabaadka bangiga laga ilaalinayo biilasha korantada sare. : GNRC).
Markii la hirgaliyay PWRview ATS, Generac wuxuu horseed ka ahaa bixinta Nidaamka Kormeerka Tamarta Guriga (HEMS) ee bedelka. PWRview ATS waxay u oggolaaneysaa guri kasta oo ku qalabaysan koronto-dhaliye guri si uu isla markiiba u helo aragtiyo awood leh oo qiimo-ku-ool ah oo ku saabsan isticmaalka tamarta guriga.
Maaddaama kormeeraha PWRview lagu dhisay beddelka wareejinta ee uu u baahan yahay koronto-dhaliyuhu, marka nidaamka koronto-dhaliyaha la rakibo, aragtida PWRview ayaa la heli karaa. Milkiileyaasha guryaha waxay ku soo dejisan karaan barnaamijka 'PWRview' taleefan kasta oo casriga ah si ay si fudud ula socdaan isticmaalka tamarta gurigooda meel kasta oo ay adduunka ka joogaan ayna furfuraan macluumaad aan horay loo arag oo gacan ka geysan kara yareynta biilasha tamarta illaa 20% 2.
Barnaamijka PWRview wuxuu u oggolaanayaa milkiileyaasha guryaha inay ka helaan adeegsiga tamartooda iyadoo la adeegsanayo bandhigga waqtiga-dhabta ah iyo 24/7 helitaanka fog ee isticmaalka korantadooda. Dashboorrada waqtiga-dhabta ah waxay bixiyaan aragtiyo qoto-dheer si ay ugu wargeliyaan milkiilayaasha guryaha marka ay lumayaan awoodda iyo halka awooddooda lagu isticmaalayo. Faahfaahinta raadinta biilka iyo saadaasha isticmaalka ayaa ku bari kara milkiileyaasha guryaha ku saabsan caadooyinka tamarta si looga takhaluso waxyaabaha layaabka leh ee ku saabsan biilalkooda billaha ah.
"Bedelaadda 'PWRview' waxay sahlaysaa in la keydiyo tamarta iyo lacagta," ayuu yiri Russ Minick, Sarkaalka Sarkaalka Suuqgeynta ee Generac. "Sameynta HEMS qayb muhiim ah oo ka mid ah wareejinta wareejinta waxay ka dhigan tahay in milkiilayaasha matoorradu ay keydin karaan lacag ku filan iyagoo adeegsanaya tamar aad u hufan si ay u dheelitiraan inta badan kharashyada nidaamyada keydka guryaha, iyagoo ku raaxeysanaya dhammaan amniga xalalka awoodda kaydinta iyo dammaanadda."
Si looga ilaaliyo guryaha iyo guryaha koronto la'aanta iyo soo bandhigida keydinta korontada ee cusub iyada oo loo marayo koronto-dhaliyeyaasha keydka guryaha Generac ee leh PWRview, fadlan booqo www.generac.com wixii macluumaad dheeraad ah
1 Xigasho: EIA (Maamulka Macluumaadka Tamarta Mareykanka) 2 Saamaynta keydinta tamarta way kuxirantahay iyadoo kuxiran caadooyinka tamarta, cabirka guriga, iyo tirada dadka degan.
Ku saabsan Generac Generac Power Systems, Inc. (NYSE: GNRC) waa shirkada aduunka ugu weyn ee keenta keydinta iyo wax soo saarka korantada ugu weyn, nidaamyada, qalabka wadista matoorrada iyo nidaamyada keydinta qoraxda. Sannadkii 1959, aasaasayaasheennu waxay naftooda u hureen naqshadaynta, injineernimada iyo soo saaridda koronto-dhaliye ugu horreeya ee la awoodi karo. In ka badan 60 sano ka dib, isla ballanqaadka hal-abuurnimo, adkeysi iyo heer sare ayaa shirkadda u suurtagelisay inay ballaariso faylalka ay ka soo saareyso warshadaha ee guryaha iyo ganacsiyada yaryar, goobaha dhismaha, iyo codsiyada warshadaha iyo moobiillada adduunka oo dhan. Generac waxay bixisaa hal mashiin oo kayd ah iyo nidaamyada awooda ugu weyn ilaa 2 MW iyo xalal isbarbar socda ilaa 100 MW, waxayna isticmaasha ilo shidaal oo kaladuwan si ay ucaawiso baahiyaha koronto ee macaamiisheena. Generac waxay martigalisaa Awoodda Korantada Dhexe, ilaha awoodda u leh xogta korantada ee Mareykanka gudihiisa Generac.com/poweroutagecentral. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Generac iyo alaabteeda iyo adeegyadeeda, fadlan booqo Generac.com
Waqtiga boostada: Juun-19-2021
Wei No.20 Road, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Yueqing City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Generac wuxuu bilaabay tran-kii ugu horreeyay ee otomaatiga ah ...
Sahaminta jahooyinka cusub ee 5G keenaya ee ...